နိုဗွီစိုက်တဲ့ ဂျုံမြက်နု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » နိုဗွီစိုက်တဲ့ ဂျုံမြက်နု
Posted by Novy on Jul 18, 2012 in Food, Drink & Recipes | 43 comments
ရွာထဲက စာရေးသူ တစ်ယောက်ရေးတဲ့ ဂျုံမြက်နုရဲ ဆေးဖက်ဝင်ပုံတွေကို ဖက်ပြီး ထဲက
စိတ်ဝင်စားပြီး စိုက်ချင်နေတာ ရန်ကုန်မှာ ဂျုံေစေ့ရှာလို မရဖြစ်နေတော့ မစိုက်ရဘူး
ဇွန်ကကုန် လောက်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက ရလို့
စိုက်ပြီး ဂျုံမြက်နု ဖျော်ရည်လုပ်ပြီး သောက်နေတယ်
ရွာသူားတွေလည်း စိုက်နိုင် သောက်နိုင်အောင်
ဂျုံစေ့တွေကို ပန်းအိုးထဲမှာ စိုက်ထားတာပါ
ဂျုံစေ့ကို စိုက်ပြီး 8-10ရက်သားမှာ ခူးထားတာပါ
အဲဒီ အချိန်က ဆေးဖက်အဝင်ဆုံးလို့ပြောလို့ပါ
သန့်စင်အောင် ဆေးထားတဲ့ ဂျုံမြက်နတွေကို သကြားလေးနဲနဲ ထည့်ပြီး ရေနဲ့ ကြိတ်လိုက်ထားတာပါ
ဂျုံမြက်နုဆိုတဲ့ အတိုင်း မြက်ရနံ့လေးတော့ ရှိတာပေါ့နော်
အနံ့ကို မကြိုက်ရင်တော့ သံပုရာသီးလေး ညစ်ပြီးသောက်လိုက်နော်
ရွာထဲက စာရေးသူ တစ်ယောက်ရေးတဲ့ ဂျုံမြက်နုရဲ ဆေးဖက်ဝင်ပုံတွေကို ဖက်ပြီး
ပိုစ် သိသေးရင် ပြန်ညွှန်းပေးပါလားဗျာ..
Fame ကထုတ်တဲ့ ဂျုံမြက်နုဆေးတော့ သောက်ဖူးတယ်…
နိုဗွီ ဖျော်ထားတာ သောက်ချင်စရာလေး
နောက်တစ်ခါရုံးမှာ ဖျော်သောက်ရင် ခေါ်လိုက်မယ်နော်
တကယ်နော် ခေါ်လိုက် စနိုးလည်းလာသောက်မယ် တကယ်ကတိတည်နော် နေရာရယ် နေရက်လေးတော့ကြိုပြောခွင့်ယူရမှာမို့ သောက်ဖူးလေရှိအောင်သောက်ကြည့်ချင်တယ်။။
60cc လောက် နေ့စဉ်သောက်ရင်ကို တော်တော်အကျိုးရှိတယ်ပြောတာပဲ..
ခက်တာက ရေမရောပဲ ကြိတ်ရမှ ဆိုတော့
မနိုဗွီ လုပ်ပြသလို ကိုယ်တိုင်စိုက် ကိုယ်တိုင်ကြိတ်မှဖြစ်မယ်..။
မျက်နံ့ကတော့ သိပ်ပြဿနာမရှိ (မြင်းခွာရွက်တောင် ထောင်းသောက်သေးတာ)
အလာဂျီဖြစ်တတ်သူနဲ့ မတည့်ဘူးတော့ ကြားဘူးတာပဲ….
လူတချို့မှာ ရှားရှားပါးပါး အနေနဲ့ ဂျုံမြက်နုနဲ့ မတည့်တဲ့ အတွက် စားသုံးလိုက်ရင်
(၁) ပျို့တက်ခြင်း (ဒီလိုမဖြစ်အောင် တခြားအစားအစာတွေနဲ့ ဝေးဝေး သုံးဆောင်သင့်ကြောင်း ပညာရှင်များ ညွှန်ကြားထားပါတယ်)
(၂) ခေါင်းကိုက်ခြင်း (ဒီလိုဖြစ်ရင်လည်း အရမ်း ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာ မလိုပါဘူး။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်များကို ဂျုံမြက်နုက ဖယ်ရှားနေတဲ့ အတွက် ပျို့တက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေ ခဏလောက် ခံစားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အလိုလိုပဲ ပြန်ကောင်းသွားပါတယ်)
(၃) ပထမဆုံးအကြိမ် စသောက်သောက်ချင်းမှာ ဒါမှမဟုတ် အလွန်အကျွံ သောက်လိုက်မိရင်တော့ ဝမ်းလျှောတတ်ပါတယ်။
(၄) ဓာတ်မတည့်ခြင်း (အရေပြားမှာ အဖုအပိန့်များထွက်ခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း စတာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဂျုံမြက်နု ထုတ်လုပ်ရာမှာ မသန့်ဘဲ မှိုပါလာလို့ ဖြစ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာ စိုးရိမ်ရလောက်တဲ့ အနေအထားတော့ မရှိပါဘူး)
စာရေးသူ ရေးထားတဲ့ စာသားတချို့ပါ
စာရေးသူ အပြစ်တင်ရင်လည်း ခံရပါတော့မယ်
လင့်ကို မမှတ်မိတော့ တာပါပဲ ပြန်ရှာပေမဲ့
နိုဗွီရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှု့ကြောင့် ရှာမရပါဘူး
ဂျုံမြက်နုရဲ ဆေးဖက်ဝင်ပုံတွေကို တော့
ကော်ပီ ယူထားလို့ ရှိနေပါတယ်
ဂျုံမျက်နုက စပီရူလိုင်းနားလိုပဲ ဖြည့်စွက်စာမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဟင်င်င်
အဲ့ဒီ လင့်ကလေးကို မှတ်မိတဲ့သူရှိရင် ပြန်ရှယ်ပေးပါအုံး
ကျော်လဲ စီဂျေထူး မေးသလိုပဲ.ဆေးဘက်ဝင်ပုံလေး..သိချင်သဗျို ့
(ဘီအီးသောက်ရင်တော့ နှာခေါင်းပိတ်စရာမလိုတော့ပါဘူး.ဘော်ဘော်တွေဖစ်နေတာကြာပြီမို ့ပါ)
အရသာကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ ရေခဲနဲ့ဆို အတော်ကောင်းမယ်နော်။ ဆေးဖတ်ဝင်တဲ့အချိန်က ၁ဝ ရက်သားလား။ ကျော်သွားမှ နုတ်ပြီး ဖျော်ရင်ကော ဆေးဖက်မဝင်တော့ဘူးလား။ ကော့မန့်မှာပဲ ပြန်တင်ပေးပါလား ဆေးဖက်ဝင်ပုံအကြောင်းအရာလေးတွေ သေချာတွဲရက်ဖတ်ရတာပေါ့နော်
အဆိုပါ ဂျုံစေ့များမှ အပင်လောင်းလေးများ ရအောင် ဖောက်ကာ ပျိုးထောင်ပေးရကြောင်း၊ ရရှိလာတဲ့ ဂျုံမြက်နု ပင်လေးများကို ၈ရက်သားမှ ၁ဝ ရက်သားအတွင်း ရိတ်သိမ်းအခြောက်လှမ်းကာ အစွမ်းထက်လှသော ဂျုံမြက်နုဆေးအဖြစ် ထုတ်လုပ်ရရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စာရေးသူ ရေးထားတဲ့ စာသားတချို့ပါ၊
ဂျုံမြက်နုရဲ့ ထူးခြားကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးများ
(၁) အပင်တွေအားလုံးနီးပါး အစိမ်းရောင် ရှိနေရတာဟာ အပင်တို့ရဲ့ ဆဲလ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အစိမ်းရောင်ခြယ်ပစ္စည်း ကလိုရိုဖီး (chlorophyll) ဆိုတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကလိုရိုဖီးဟာ လူသားရဲ့ အသက်ရှည် ကျန်းမာရေးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဂျုံမြက်နုဖျော်ရည် (Wheatgrass Juice) ဟာ ကလိုရိုဖီးတွေရရှိနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အစားအသောက်ပင်ရင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(၂) အလင်းကနေရတဲ့ သဘာဝစွမ်းအင် နဲ့ အောက်စီဂျင် ပါဝင်မှုမှာ ဂျုံမြက်နုက အမြင့်မားဆုံး အစားအသောက် တစ်မျိုး ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဂျုံမြက်နုမှာ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု အင်ဇိုင်း (Enzymes) ၈ဝ ကျော် ပါဝင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါတွေကို ကာကွယ် တားဆီးပေးနိုင်သလို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိခြင်းဟာ သူ့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။
(၃)နေရောင်ခြည်ရဲ့ သဘာဝစွမ်းအားတွေ စုစည်းထားတဲ့ ဂျုံမြက်နုဟာ နှလုံးနဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှု၊ အူ၊ သားအိမ်နဲ့ အဆုတ်များရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
(၄) ကူးစက်ရောဂါပိုးတွေကို ကာကွယ်တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ အနာကျက်မြန်စေတဲ့ ဆေးအဖြစ် သုံးလို့ရပါတယ်။
(၅) ထူးခြားချက် အနေနဲ့ ဂျုံမြက်နုဖျော်ရည်ဟာ သောက်ချလိုက်တာနဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ ကြေပျက်သွားနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
(၆) ဂျုံမြက်နုဟာ ကလိုရိုဖီး ကြွယ်ဝလို့ သွေးအားကို ပြန်ဖြည့်တင်းပေးနိုင် ပါတယ်။ သွေးနီဆဲလ်ပမာဏ အရမ်း ကျဆင်းလို့ သွေးအားနည်းရောဂါ (Anaemia) ရနေတဲ့ သူတွေကို ဂျုံမြက်နု ဖြည့်စွက် ကျွေးမွေးပေးရင် ၄ ရက် ၅ ရက် အတွင်းတောင် ပုံမှန်ပမာဏကို ပြန်ရောက်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၇) မြုံနေတဲ့ နွားထီး နွားမတွေကို ပုံမှန်ကျွေးပေးရင် မြုံနေခြင်း ကနေတောင် ပြန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မဂ္ဂနီစီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့ ကလိုရိုဖီးဟာ မျိုးပွားဟော်မုန်းတွေကို ပုံမှန်ကောင်းမွန်စေတဲ့ အင်ဇိုင်း (Enzymes) တွေကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၈) ကလိုရိုဖီးဟာ အစိ်မ်းရောင် အပင်တွေ အားလုံးမှာ ပါဝင်ပေမယ့် ဂျုံမြက်နုရဲ့ ကလိုရိုဖီးက သာလွန် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဩဂဲနစ်နည်းပညာနဲ့ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဂျုံမြက်နုဟာ မြေဆီလွှာထဲမှာ ရှိတဲ့ သတ္တုဓာတ် ၁၀၂ မျိုးထဲ ၉၂ မျိုးအထိ စုပ်ယူနိုင်တဲ့ အတွက် သူ့အထဲမှာ လူသားတွေ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဒြပ်စင် ၁၀ဝ ကျော်အထိ ပါဝင်နေတာကို ထူးခြားအံ့ဩဖွယ် တွေ့ရှိရပါတယ်။
(၉) ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်သျှူးတွေကို အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
(၁၀) ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ နေရာမှာ မုန်လာဥဝါဖျော်ရည် အပါအဝင် အခြားသော သစ်သီးဝလံဖျော်ရည်တွေ ထက်တောင် ပိုအစွမ်းထက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂျုံမြက်နု တစ်ပေါင်ခွဲ စားရင် မုန်လာဥဝါ၊ ဆလတ်ရွက်၊ တရုတ်နံနံပင် စတဲ့ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ၃၅ ပေါင်စားတာနဲ့ ညီမျှတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၁၁) ဆေးဝါးတွေ ခန္ဓာကိုယ်မှာ စုပုံခြင်းကို ဖယ်ရှားထုတ်ပစ် နိုင်လို့ ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို နည်းစေပါတယ်။ အဆိပ်အတောက်တွေကို ပျက်ပြယ်စေပါတယ်။ အသည်းသန့်စင်စေလို့ အသည်းရောဂါ ရှိသူတွေအတွက် အရမ်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဆီးချိုရှိသူတွေ ပုံမှန်မှီဝဲသွားရင် သွေးတွင်းသကြားပမာဏ (blood sugar level) ကို ပိုမို ထိန်းသိမ်းနိုင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
(၁၂) အလှအပ ဖက်ဆိုင်ရာကနေ ကြည့်ရင် ဂျုံမြက်နု ဖျော်ရည်ဟာ ဝက်ခြံတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီး အမာရွတ်တွေကိုလည်း ပျောက်စေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခံတွင်းနံ့နဲ့ ကိုယ်နံ့မကောင်းခြင်းလည်း ပျောက်ကင်းစေပြီး တစ်နေ့ နည်းနည်း စားသုံးသွားရုံနဲ့ သွားများကို ခိုင်မာစေကြောင်း တွေ့ရှိထားရပါတယ်။ ဆံပင်ဖြူလည်း နှေးစေပါသတဲ့။ ခုခံအားစနစ် ပျက်ယွင်းလို့ ဖြစ်ရတဲ့ နှင်းခူနဲ့ လေးဖက်နာရောဂါ အမျိုးမျိုးတို့လည်း သက်သာစေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။
(၁၃) ဂျုံမြက်နုဖျော်ရည်ကို ခံတွင်းမှာ ၅ မိနစ် ငုံထားရင် သွားကိုက်တာကို သိသိသာသာ သက်သာစေပြီး ခံတွင်းထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ လည်ချောင်းနာခြင်းနဲ့ သွားဖုံးပြည်ယိုနာ ကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
(၁၄) မဂ္ဂနီစီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့ ဂျုံမြက်နုဟာ ဝမ်းချုပ်သူတွေအတွက်လည်း ဘေးဥပဒ်မရှိတဲ့ သဘာဝ ဆေးကောင်းတစ်လက် ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၅) သွေးတိုးရောဂါကို ထိန်းထားပေးနိုင် ပါတယ်။
(၁၆) ယနေ့ခေတ်ရဲ့ မြို့ပြလေထုထဲမှာ အနည်းနဲ့ အများ ဆိုသလို ပါဝင်နေတဲ့ အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ ကာဘွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (Carbon Monoxide) ရဲ့ အဆိပ်အာနိသင်ကို အနည်းဆုံးအထိ လျှော့ချ ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၁၇) ခဲ (Lead) ၊ စိန်ဖြူခေါ် အာဆင်းနစ် (Arsenic) ၊ ပြဒါး (Mercury) စတဲ့ အဆိပ်သတ္တုများကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။
(၁၈) သာလစီးမီးယား (Thallasemia) ၊ ဟေမိုဖေးလေးယား (Haemophillia) စတဲ့ သွေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါများ အားလုံးအတွက် အထူးကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(၁၉) ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်စွမ်းရည် (Antioxidant Property) ရှိတဲ့ ဂျုံမြက်နုဟာ ဆဲလ်များ ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အိုမင်းခြင်းကို အထူးနှေးကွေးစေ ပါတယ်။
အထက်ပါစာသားများသည် မူရင်းစာရေးသူအိ စာသားများဖြစ်ပါသည်
အမေက သွေးတိုးသမားမို့ အမေ့ကို တိုက်ချင်လို့ ပါ။
ကျမလည်း သောက်နိုင်ရင် သောက်ပါအုန်းမယ်။
ဂျုံမြက်နု မျိုးစေ့ကို ဘယ်မှာ များ ဝယ်လို့ အဆင်ပြေနိုင်မလဲ မသိဘူး။
ပြောလက်စနဲ့ နေရာလေးပါ သိရင် ညွှန်ပါအုန်းနော်။
အသည်းသန့်စင်စေတယ်ဆိုတော့ ဘီအီး ဗို်က်ဗိုက်အတွက်တော့ ကွက်တိဘဲ။။ (၇) နဲ့လည်း ကိုက်ရင်ကိုက်နေမှာ … :grin:
နိုဗီသောက်ပြီး တစ်ပါတ်လောက်နေရင် ထူးခြားတာလေးတွေ ပြန်ပြောနော် ..
တစ်နေ့ နဲနဲစားသွားရုံဆိုတော့ ဒီအတိုင်း တို့စရာ အဖြစ် စားလို့ရလားဟင်..
»ကတိသစ္စာ တည်သောအခါ နွယ်မြက် သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်၏။”
၁ ရှူရှူးပေါက်စေပါတယ် ကျောက်ကပ်ကို လန်းစေလို့
၂ အန်တီအောက်ဆီးဒန့်ပါတဲ့အတွက် ကင်ဆာတွေကို ကာကွယ်တယ်။ အသားအရေ စိုပြေနုပျိုစေပါတယ်
၃ အသည်းရဲ့ဖန်ရှင်တွေကို ဆာပို့ပေးပတယ်
၄ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ပိုဂွတ်ပါတယ်
ပုံ ပရော်မဖက်မဆာ မေပေါင်
ဘဝ ပြောင်းသွားလေသလားလို့ ..
မေပေါင် ဆိုတော့ မောင်ပေ ဖြစ်သွားရောပေါ့နော့ …
မနိုရေ … ကြားတော့ကြားဖူးနေတာ … မသောက်ဖူးသေးဘူး
အခုလို ပုံတွေမြင်ရတော့မှ ကိုယ်တိုင်စိုက်ကြည့်ချင်စိတ် ပေါက်လာတော့တယ် …… ။
အစေ့ကို မြေပဒေသာကျွန်းလို နေရာမျိုးမှာ ဝယ်လို့ ရနိုင်မယ်ထင်တယ် …. ။
မနိုပုံလေးမြင်တော့မှ … စိုက်ကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ် … စိုက်ကြည့်ဦးမှပဲ … ဒါနဲ့ …. ဘလန်ဒါ တစ်ဝက်ကို မြက်က အခုပုံထဲကလောက်ပဲ ထည့်ရမှာလား … ။
ဘလန်ဒါ တစ်ဝက်ကို မြက်က – ဟုတ်တယ်အိတုံရေ
မြေပဒေသာကျွန် မှာတော့ မရနိုင်ဘူးထင်တယ်
မနို အညာကို လူကြုံနဲ့မှာထားတယ်
သွားနာနေတာနဲ့အတော်ပဲ အဲ့ဒါပါပျောက်တယ်ဆိုတော့။ဖျော်နေရင်ကြာလွန်းလို့။ ဒီအတိုင်းပဲ ဝါးစားလိုက်တော့မယ်။
အသုံးဝင် ဆေးဖက်ဝင် တာထက် ခုလို ကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုး ပြီး သောက် တာ ကိုပိုပြီး သဘော ကျတယ်။
ကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုး ပြီး သောက်သလို share ပေးတာ ကို ပို ပြီး လေးစားတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂျုံမြက်နုက ပုံမှန်ဂျုံစေ့ကပဲ စိုက်ရတာလား။
ပန်းအိုးတစ်အိုးစာ စိုက်ရုံနဲ့ သောက်လို့ လောက်ရဲ့လားလည်း သိချင်သား။ [:)]
ဂျုံပင်ပေါက် က မတည့်ရင်အနာပေါက်တတ်တယ်နော
အဲဒီ ဂျုံစေ့တွေ က ဒီမှာ ပေါမှပေါ။
အဲလို စိုက်လို့ ရမရ တော့မသိဘူး။
ဖျော်ရည် ထက် အတို့ လုပ်ပြီး စားမလို့။
အရီးလတ်လည်း ဆံပင်ဖြူနှေးစေတယ်ဆိုတာ နဲ့ဖြစ်ရမယ် .. :grin:
အာအိုဂျိရုမှတ်နေတာ… ပုံကြည့်မှ မဟုတ်မှန်းသိတယ်..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. အာအိုဂျိရုက.. ပိုနာမယ်ကြီးနေတယ်ထင်တာပဲ..
Aojiru (青汁?) isaJapanese vegetable drink most commonly made from kale. The drink is also known as green drink or green juice in English,adirect translation of the Japanese meaning. (In modern Japanese, the character 青 ao means “blue”, but it is commonly still used in older contexts to refer to green vegetation).
မြက်ဖျော်ရည်တွေလုုပ်ဖိုု့ ဆိုုင်မှာစိုုက်ထားတဲ့ မြက်ခင်းကွက်ကလေးတွေ တွေ့တိုုင်း မြက်စားနွား ဘဝရောက်သွားသလိုု ခံသားမိလိုု့ အသဲယားတာနဲ့ တခါမှ မသောက်ကြည့်ဖြစ်ဘူး
ကျုပ်တို့ မြက် စားတာ ကြာဘီမဟုတ်လားဗျာ ..
မြက် ကို အရွက်လိုက်တော့ မဟုတ်တဲ့ မြက်သီး ကို မွေးကတည်းက
နောက်တာပါ အတည်ပြောပါ့မယ် စပါးပင်ဟာ မြက် မျိုးနွယ်ဝင် ဖြစ်တော့
စပါးဟာ မြက်သီး လို့ ခေါ်မယ်ဆိုရင် လွန်အံ့မထင်…
အန်တီနိုဗီ အား အားပေးသွားကြောင်း ချရေးရန် မေ့သွားပါသည်….
မနိုကတော့ ရန်ကုန်မှာ ရှာရခက်လို့ စစ်ကိုင်းက သူငယ်ချင်းကို
မှာလိုက်ပါတယ် စစ်ကိုင်းမှာ ဂျုံစေ့ကို အလေးချိန်နဲ့ရောင်းပါတယ်တဲ့
မနိုကတော့ နေတိုင်းမသောက်ရသေးဘူး ( ဂျုံစေ့မလောက်မှာစိုးလို့)
ရုံးကညီမလေးတစ်ယောက်တော့ လည်ပင်းနာနေတာ ဖျော်ရည်လည်းသောက်ပြီရော
ပန်းအိုး3လုံးလောက်ကို ရက်ခြား ရက်မှတ်ပြီးစိုက်ရင် အစဉ်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်
တို့စရာ လုပ်လို့ အစဉ်ပြေရင် နိုဗွီကိုလည်း လက်တို့လိုက်အုံးနော်
ပန်းတနော်က အပြန်မှာ အဲဒီ့ ပို့စ်ကို ဖတ်မိလို့ပါ
ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်ဆိုရင် အကုန်သာစိုက်စား
လူလည်း သတ္တဝါ မို့ သိပ်မကြောက်ပါနဲ့ကွယ်
lazy boy / laypai / မဟာရာဇာ အံစာတုံး / သားဦးမြေးဦး၊ ဝမ်းတွင်းရူး /
စိန်ဗိုက်ဗိုက် / mamanoyar/ snow white / wow
ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့သွားတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ
မနိုရေ မန်းလေးက ပွဲရုံမှာ ဝယ်လို့ရတယ်။ ဝယ်ပြီးပြီ။ ဒီညနေ အိုးထဲ မြေထဲ့ထားတယ် ။ မနက်မှ မျိုးကြဲတော့မယ်။ ပန်းအိုး အကြီးနဲ့ ၃ အိုး လောက်စိုက်မယ် မှန်းတယ်။
သောက်ပြီး အခြေအနေ ထူးရင် ပြောမယ်နော်။
3အိုးတောင်စိုက်မှာဆိုတော့ အိမ်မှာ သောက်မဲ့လူများလို့လားဟင်
မနို ပုံမှာပြထားသလောက်ဆိုရင် လူ5ယောက်လောက်သောက်လို့ရတယ်
အဲ့ဒါ ပန်အိုး 1အိုးစာပဲ
သူက မြက်နုတွေခူးပြီးသွားရင် အိုးထဲမှာ ကျန်နေတဲ့
အစေ့တွေနဲ့ အမြစ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ရမယ်နော်
ပြီးတော့မှာ နောက်ထက် ဂျုံစေ့အသစ်စိုက်ပေါ့
သူက စိုက်ပြီး 8-10 ရက် အတွင်း ခူးရမှာဆိုတော့လေ
သောက်မှာကတော့ ဦးလေး အဒေါ် အမေ ရယ် ကျမရယ် ၄ ယောက်လောက်ပါပဲ။
မနို ပြောသလိုပဲ ရက်ခြားစိုက်မှာပါ။ နေ့တိုင်း သောက်ကြည့်မယ် စိတ်ကူးတာရော အမျိုးအိမ်လည်း မျှမယ်လို့ တွေးမိတာရော ကြောင့် အိုးများသွားတာပါ။ နေ့တိုင်းသောက်လို့ ရတယ် မဟုတ်လား မနို။
သူကြီးပြောတဲ့ အသီးကတော့ မျိုးရှာကြည့်အုန်းမယ်။ ခက်မယ် ထင်ရဲ့ ။
စိတ်ဝင်စားရင်.. အပေါ်က ကန္တာရအပင်လည်း စိုက်သင့်ပါတယ်..
မြန်မာပြည်မှာစိုက်ပြီး.. နိုင်ဂျံဂါးပို့လည်း.. သူဌေးဖြစ်နိုင်တာ..
ရန်ကုန်မှာ အဲ့လို အသီးသီးတဲ့ မျိုးကို
ဦးကြောင်က နွားဂျီးဆိုရင် နိုဗွီက ဂျုံမြက်နုဂလေးပေါ့ကွယ်။ သိပ်လန့်သွားသလား မမြဝင်း၊ ဗိုလ်ကြောင်ဒင် ဘောင်းဘီချွတ်တာ အပေါင်ဆိုင်သွားထား မလို့ပါကွဲ့…ငှဲ ငှဲ ငှဲ…….
ဂျုံမြက်နုက အစေ့သာပျိုးလို့ရလျှင် ဒီအတိုင်းစိုက်ထားတာနဲ့ ရှင်တာပါပဲ ။
အပင်လေးတွေက စိမ်းစိမ်းဆိုဆိုနဲ့ အရွက်ထောင်ထောင်လေးတွေဆိုတော့ တစ်ချို့တွေဆို အလှပန်းအုးိလိုကို ဂျုံမြက်နုကို စိုက်ကြတယ် ။